Shiinaha warshad carrabka leh oo la kariyey oo la kariyey | Huikang
Cuntada la qaboojiyey waxay u qaybsan tahay cuntada la qaboojiyey iyo cuntada la qaboojiyey. Cuntada barafaysan way fududahay in la xafido waxaana si aad ah loogu isticmaalaa soo saarista, daabulida iyo keydinta cunnooyinka xumaada sida hilibka, digaaga, wax soo saarka biyaha, caanaha, ukunta, khudaarta iyo miraha; waa nafaqo, ku habboon, nadaafad iyo dhaqaale; Baahida suuqa waa mid weyn, waxay ku fadhidaa boos muhiim ah wadamada horumaray, waxayna si xawli leh ugu horumaraysaa wadamada soo koraya.
Cunto la qaboojiyey: uma baahna in la qaboojiyo, waa cuntada heer kulka cuntada hoos loogu dhigo si loogu dhawaado barta qabow laguna keydiyo heerkulkan.
Cunto barafaysan: Waa cuntada lagu keydiyay heerkul ka hooseeya barta qabowgu markuu qaboojiyey ka dib.
Cunnooyinka la qaboojiyey iyo cuntooyinka la qaboojiyey ayaa si wada jir ah loogu magacaabaa cuntooyinka la qaboojiyey, kuwaas oo loo qaybin karo shan qaybood: miraha iyo khudradda, badeecooyinka biyaha ku jira, hilibka, digaagga iyo ukunta, bariiska iyo waxyaabaha noodle, iyo diyaarinta cuntooyinka ku habboon ee ku habboon alaabta ceeriin iyo qaababka isticmaalka.
Francis Bacon, waa qoraa Ingiriis ah oo qarnigii 17aad iyo falsafad, wuxuu isku dayay inuu baraf ku rido digaag si uu u qaboojiyo. Si lama filaan ah, wuxuu qabtay qabowga durba wuu xanuunsaday. Xitaa ka hor tijaabada nasiib darrada ah ee hilibka doofaarka, dadku way ogaayeen in qabowga daran uu ka hortagi karo cunista hilibka “inuu xumaado.” Tani waxay sababtay mulkiileyaasha hodanka ah inay ka dhigaan qolal baraf ah guryahooda kuwaas oo keydin kara cuntada.
Midkoodna isku daygan hore ee qaboojinta cuntada ma uusan qabanin furaha dhibaatada. Maaha wax badan darajada qaboojinta, maadaama ay tahay xawaaraha qaboojinta, taasi ayaa fure u ah qaboojinta hilibka. Malaha qofkii ugu horreeyey ee tan gartay wuxuu ahaa khabiirkii Mareykanka ahaa ee la oran jiray Clarence Birdseye.
Ma ahayn illaa 1950-meeyadii iyo 1960-yadii, markii qaboojiyeyaasha reerku ay aad caan u noqdeen, in cunnooyinka barafoobay ay bilaabeen in lagu iibiyo tiro aad u badan. Wax yar ka dib, baakadaha caanka ah ee gaduudka, caddaanka, iyo buluugga ah ee Boz Aiyi ayaa ka jiray dukaamo ku yaal meelo badan oo adduunka ka mid ah waxayna noqotay muuqaal caan ah.
Dhowr sano ka dib Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, Bozee waxay tirakoob ku sameysay dhirta duurjoogta ah markii ay ku safraysay Jasiiradda Labrador ee Kanada. Wuxuu ogaaday in cimiladu aad u qabow tahay oo kalluunka si adag u qaboojiyey ka dib markii uu qabtay kalluun. Wuxuu rabay inuu ogaado bal inay tani fure u tahay kaydinta cuntada.
Si ka duwan Bacon, Birdseye wuxuu ku noolaa xilligii qaboojiyaha. Kadib markuu ku noqday gurigiisa 1923, wuxuu tijaabiyay qaboojiyaha kushiinkiisa. Marka xigta, Boz Aiyi wuxuu isku dayay qaboojinta noocyo kala duwan oo hilib ah warshad weyn oo barafaysan. Birdseye waxay aakhirkii ogaatay in sida ugu dhakhsaha badan ee cuntada lagu qaboojiyo ay tahay iyadoo hilibka la tuujiyo inta u dhexeysa laba taariko bir ah oo la qaboojiyey. Markay ahayd 1930s, wuxuu diyaar u ahaa inuu bilaabo iibinta cuntooyinka barafoobay ee laga soo saaray warshaddiisa Springfield, Massachusetts.
Boz Aiyi, cuntada la qaboojiyey waxay si dhakhso leh ugu noqotay ganacsi weyn, xitaa ka hor intaanu ikhtiraacin hannaanka wax lagu qaboojiyo ee laba-saxan ee waxtarka leh, shirkaddiisu waxay qaboojisay 500 tan oo miro iyo khudrad ah sanadkiiba.
Soo bandhigida alaabta Qalabka ceyriinka wuxuu ka yimaadaa kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaan gelinta dhoofinta ee Shiinaha. Inta badan lagu sameeyo Shiinaha.
Faahfaahinta Product Jeex iyo laadh, xidho xadhig
Tilmaamaha alaabta Waxay leedahay dhadhanka gaarka ah ee carrabka dibiga
Codso kanaalka Cunto, dukaamada raaxada, qoysaska Qaabka loo isticmaalo: Fry iyo solay.
Carrabka lo'da waa la suugi karaa, la duban karaa, ama la kari karaa. Afafka lagu iibiyo suuqyada qaar ayaa diyaar u ah inay wax cunaan, laakiin carrab ceyriin, sigaar cabbin ama carrab aan macaan lahayn ayaa badanaa la heli karaa. Cunto karinta ka dib, way fiicantahay ha ahaato mid kulul ama qabow, ha ahaato ama ha udgoonayn. Carrabbada cusbada leh ayaa badanaa la kariyaa oo lagu jarjarey casiir la miiray. Badanaa waxaa loogu adeegaa qabow. Carrabka ceeriin waxaa lagu kariyey khamri ama waa la kariyey waxaana lagu siin karaa qalab kala duwan. Carrabka lo'da iyo hilibka lo'da ayaa ah kuwa ugu caansan, sida carrabka lo'da ee maraqa ku jira.
Hore: Xaleef Doofaar la kariyey oo barafaysan
Xiga: Karootada la jarjaray ee la qaboojiyey